Dowladda Soomaaliya oo eedeyn iyo baaq u jeedisay Kenya
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowlada federaalka ayaa Kenya ku waanisay "in ay si deg-deg ah u joojiso xadgudubyada ka dhanka ah madax banaanida Soomaaliya iyo hurinta xasiloonida darada ee ay kawado sohdinta".
Xukuumadda Muqdisho ayaa daboolka ka qaadey in ay aqoonsan tahay AMISOM, balse aysan ka ogolaan doonin wadamada ciidamada ku taageeray howlgalka ay xubinimadooda u adeegsadaan danahooda gaarka ah.
Muqdisho ayaa sheegtay in ay xusuusineyso Nairobi deris-wanaaga iyo xiriirka taariikiga ah. Hadalkaan ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo nuqul kamid ah uu arkay Garowe Online.
Derbiga oo dhirirkiisu gaarayo 700KM ayaa lagu xirayaa Koronto iyo Kaamirooyinka CCTV...
Farmaajo oo ka hadlay tirada Soomaalida xili uusan jirin tirokoob
War Saxaafaded 12.11.2019. 15:33